लेनिन कथा – १५ - Online Majdoor
मरिया प्रिलेजायेभा १८ जेष्ठ २०७७, आईतवार १६:३१
यो पुस्तकले बडो सरल, आत्मीयतापूर्ण र भावोत्तेजक शैलीमा लेखिएका स–साना कहानीहरूमार्फत क्रान्तिकारी नेता र व्यक्तिको रूपमा लेनिनको सर्वाङ्गीण र जीवन्त चित्र प्रस्तुत गरेको छ ।
अघिल्लो अङ्कमा हामीहरूले लेनिनले प्रवासी जीवन बिताउँदै गर्दाका विभिन्न उतारचढाव र लेनिनका युद्ध विरोधी विचारको बारेमा सविस्तार पढ्यौ ।)
बर्नमा लेनिनले साम्राज्यवादको बारेमा किताब लेखे । लुटपाट गर्ने लडाइँबिना पँुजीपतिहरू किन उँभो लाग्दैनन् भनी उनले यस किताबमा प्रस्ट पारे । उनीहरू पराइ मुलुकहरू कब्जा गर्छन्, तिनलाई उपनिवेश बनाउँछन्, अरूको रगत चुसी– चुसी मोटाउँछन् । आफ्नो लालचलाई लगाम लगाउन नसक्ने हुनाले उनीहरूले संसारलाई नै आपसमा बाँड्न, ठुलोभन्दा ठुलो हिस्सा हत्याउन कोसिस गर्छन् । यो प्रक्रिया जारी रहुञ्जेल लुटपाट मच्चाइने लडाइँहरू भइरहनेछन् । साम्राज्यवादका कारण जनसाधारणको अवस्था झनै सङ्कटग्रस्त हुनेछ । तर मजदुर वर्गको चेतना र शक्ति पनि बढिरहेको छ । समाजवादी क्रान्तिको घडी नजिकिँदै छ ।
यस्तो किताब लेख्न समग्र विश्वको इतिहास र विश्वको जनजीवनलाई बुझ्न आवश्यक थियो । यस किताबको तयारीका क्रममा लेनिनले अत्यन्त धेरै किताबहरूको अध्ययन गर्नुप¥यो ।
बर्नदेखि लेनिन र क्रुप्सकाया ज्युरिख आए । सुरुमा दुई हप्तामात्रै बस्ने मन थियो तर कामले गर्दा पूरा एक वर्ष त्यहीँ रोकिनुप¥यो । ज्युरिखको पुस्तकालय धेरै गतिलो थियो । सहर पनि नराम्रो थिएन । ठुलो चहल–पहल, धेरै कलकारखाना र मजदुरहरूको ठुलो उपस्थिति… ।
लेनिन साँझसम्म पुस्तकालयमा बसिरहन्थे । दिनमा केहीबेरलाई कोठामा आउँथे, खाना खान्थे र फेरि गइहाल्थे ।
पुस्तकालय जाने साँघुरो सडकको किनारमा कटुसका अग्ला–अग्ला रुख उभिएका थिए । त्यस वर्ष लेनिनले दिनको कम्तीमा चारचोटि ती कटुसका रुखमुनिबाट टाउन हल, प्राचीन गिर्जाघर हुँदै पुराना घरहरू नछिचोलेका सायदै कुनै दिन हुँदा हुन् ।
यहाँदेखि केही दुरीमा ज्युरिख ताल थियो । त्यहाँ क्रुद्ध छालहरू उर्लिन्थे र गर्जिँदै किनारमा ठोकिन्थे । त्यसको नजिक जान पनि डर लाग्थ्यो । तर, छालहरू बसेपछि पानीको निलो सतह घामले टल्किन्थ्यो । त्यसबेला तालको सौन्दर्यले मनै हथ्र्यो । स्वीजरलैन्डको प्राकृतिक सौन्दर्यले लेनिन मुग्ध हुन्थे । तैपनि, मातृभूमिको सम्झनाले उनलाई हरबखत सताइरहन्थ्यो । ओहो ¤ तिनताक उनी रूसको यादमा कति व्यथित रहन्थे ।
एक दिन दिउँसोको खानापछि लेनिन पुस्तकालय फर्किन तयार भएका थिए । त्यसै बेला कसैले जोड–जोडसँग ढोका ढक्ढक्यायो । आगन्तुक एक प्रवासी थियो । उत्तेजनामा अनुमतिको प्रतीक्षा पनि नगरी गनगन गर्दै ऊ सीधै कोठाभित्र पस्यो ।
“तपाईंले सुन्नुभो ? सुन्नुभएन ? रूसमा क्रान्ति भएको छ ।” आगन्तुकले हडबडाउँदै भन्यो ।
लेनिनले फ्याट्ट टोपी उठाए । क्रुप्सकायाले हिँड्डाहिँड्दै कोट लगाइन् । तीनैजना तालतिर लागे । तालमा आकाश घोप्टिएजस्तो देखिन्थ्यो । गर्वले शिर उठाउँदै सेता हाँस पानीमा तैरिरहेका थिए ।
लेनिन पत्रिकाको स्ट्यान्डतिर हुत्तिए । यहाँ, तालको किनारमा जतिबेला पनि ताजा पत्रिकाहरू टाँगिएका हुन्थे ।
लेनिनले व्यग्र भई पत्रिकाहरूमा छापिएका समाचारका शीर्षकहरूमा नजर दौडाए – “फेब्रुअरी, १९१७ । रूसमा क्रान्ति ।” “आखिर भएरै छोडयो,” लेनिनले उत्तेजना लुकाउन सकेनन् । उनी रूससँग घनिष्टरूपले जोडिएका थिए । उनले त्यहाँ बढ्दै गरेको क्रान्तिको नेतृत्व गरेका थिए । क्रान्ति नजिकै छ भन्ने उनले बुझेका थिए । तैपनि मातृभूमिदेखि आएको खबरले उनलाई असाध्यै उत्तेजित गरायो ।
उता रूसमा निकै महत्वपूर्ण घटनाहरू घटिरहेका छन् भन्नेमा शङ्कै थिएन । अब जति सकिन्छ चाँडो घर फर्किनु थियो । मातृभूमि टेक्नु थियो । अझै पनि यहीँ अडिनु मनासिब थिएन । जसरी हुन्छ तुरुन्त रूस फिर्नु थियो । आखिर उनको सम्पूर्ण जीवन, सम्पूर्ण श्रम यसैमा अर्पित थियो । रूसमा हाल घटिरहेका घटनाका लागि समर्पित थियो । तर, यहाँबाट जाने पो कसरी ? लेनिनको चैन हरायो । आँखाको निन्द्रा रित्तियो । उनी दुब्लाउन थाले ।
अन्ततः स्वीस साथीहरूको दौडधुप र प्रयत्नहरूले गर्दा रूसी प्रवासी क्रान्तिकारीहरूले निर्गमन भिसा पाई छाडे ।
गाडी छुट्न दुई घन्टा बाँकी थियो । लेनिन अब पराइ देशमा एकछिन पनि रोकिन चाहन्नथे । यी दुई घन्टामा सामान मिलाउनु थियो । पुस्तकालयबाट ल्याएका किताबहरू फर्काउनु थियो । घरभाडा बुझाउनु थियो । तर, पनि सबै काम पूरा भयो । निश्चित समयमा उनीहरू ज्युरिखदेखि बर्नतर्फ लागे । बर्नदेखि जर्मनी जाने गाडी लिनु थियो । लेनिनसँगै अन्य प्रवासीहरू पनि मातृभूमितिर फर्किरहेका थिए ।
“सहायता र शरणको लागि धन्यवाद ¤” स्वीजरलेन्डको धर्ती छोड्दै गर्दा लेनिनले स्वीश साथीहरूलाई आभार सन्देश पठाए ।
गाडी स्वीजरलैन्डका मनमोहक ताल र सगर्व शिर ठड्याएका पहाडहरूलाई पछाडि छोड्दै, पुत्ताउँदै र छुकछुक गर्दै अगाडि बढिरहेको थियो ।
जर्मनीको भूमि पनि पार भयो । अगाडि बाल्टिक सागरको विक्षुब्ध विस्तार थियो । युद्धका कारण समुद्रमा जताततै सुरुङ्ग बिछ्याइएको थियो । जसोतसो एक मालबाहक जहाजमा उनीहरू स्वीडेन पुगे र त्यहाँबाट फिनलैन्ड गए । उफ ¤ यात्रा कति लामो र खतरनाक थियो । तर, अब चाँडै पेत्रोग्राद आउँदै थियो । सन् १९१४ मा जर्मनीसँग युद्ध सुरु हुँदा पिटर्सवर्गको नाम पेत्रोग्राद राखियो । गाडीको झ्यालबाट जङ्गल देखिन्थ्यो । सेतो बरफ पूरै पग्लिसकेको थिएन । लेउका टाटाहरूले ढाकेको दलदलमा जताततै कालो पानी टल्किरहेको थियो । “राती पेत्रोग्राद पुग्दा सबै सुतिरहेका हुने होलान्,” क्रुप्सकाया बोलिन् ।
ल्याम्पपोस्टहरूको मधुरो उज्यालोमा ढुङ्गाका भवनहरूबीच ठुल्ठुला धमिला आकार देखिन थाले । ती गोदाम, डिपो आदि थिए । गाडीको रफ्तार कम भयो ।
फिनलेन्डको रेल स्टेसन अब टाढा थिएन । रात्री निस्तब्धतालाई चिर्दै इन्जिनले सिट्ठी बजायो । रेल प्लेटफर्ममा रोकियो । इन्जिनले चर्को आवाज निकाल्दै बाफ छोडिरहेको थियो । लौ, के भएको होला ? यहाँ सङ्गीत किन ? प्लेटफर्ममा मोर्सेईको धुन बजिरहेको थियो । “सलामी दिन सबै सावधान हुनू ¤” आदेश सुनियो ।
प्लेटफर्म मान्छेले अटेसमटेस थियो । त्यहाँ आउनेहरूमा पेत्रोग्रादका मजदुर थिए । लालगार्डका सैनिक थिए र क्रोनश्ताद्तका नाविकहरू थिए ।
एकाएक पूर्ण निस्तब्धता छायो । लाल सैनिक र नाविकहरू सलामी दिनको लागि लाइन बाँधेर उभिए ।
लेनिन आफ्नो डिब्बाको ढोकामा आए । उनी आश्चर्यचकित थिए ।
लेनिन जिन्दावाद ¤ लडाइँ रोकियोस् ¤ क्रान्ति जिन्दावाद ¤ जवाफमा आकाश गुञ्जायमान भयो ।
प्लेटफर्मबाहिर रेल स्टेशनअगाडिको चोकमा पनि हजारौँ आवाजहरूले यी नारा दोहो¥याए । चोकमा जनसागर उर्लिएको थियो । प्लडलाइटहरूको उज्यालोमा झन्डा आगोको ज्वालाजस्तै फहरिँदै थिए ।
स्टेसनबाहिर एउटा हतियारयुक्त गाडी उभिएको थियो । त्यसका तोपहरू चुपचाप थिए । त्यसले पनि पार्टी र मजदुर वर्गका नेतालाई स्वागत गरिरहेको थियो । मजदुर र सैनिकहरूले लेनिनलाई त्यस गाडीमा चढाए । असङ्ख्य मैत्रीपूर्ण हात उनीतर्फ बढे । असङ्ख्य आँखाहरू मुस्कुराए ।
लेनिनलाई त्यहाँ उपस्थित सबैजनालाई युद्ध र विपत्तिले सन्तप्त ती मजदुर साथीहरूलाई अँगालो हालुँजस्तो भयो ।
‘‘साथीहरू,’’ लेनिनले भने । “तपाईंहरूले क्रान्ति गर्नुभएको छ, जारको सत्ता उल्टिएको छ । तर, सत्ता पँुजीपतिहरूले कब्जा गरेका छन् । उनीहरू हामीमाथि राज गर्न चाहन्छन् । हामीलाई त कामदार वर्गको राज चाहिन्छ । हामी दिनको आठ घन्टा कामको अवधि चाहन्छौँ । हामी किसानहरूलाई जमिन, भोकाहरूलाई रोटी, संसारलाई शान्ति हासिल गर्न चाहन्छौँ । हामी समाजवादी क्रान्ति चाहन्छौँ ।”
“हो हो, लेनिन जिन्दावाद ¤” जनसमूह चिच्यायो । फिनलैन्ड स्टेसनअगाडिको चोकको वातावरण जग्मगाएको थियो । मानौँ, यो रात नभएर खुसीयालीपूर्ण वसन्तको सुनौलो बिहानी हो ।
एकछिनको धुमधामपछि हतियारयुक्त गाडी गुड्यो । लेनिन सधैभरिलाई घर फर्किएका थिए ।
लेनिनले सिरानीबाट शिर उठाए । सफासुग्घर, साधारण कोठा । सानो लेख्ने टेबल । टेबलमाथि नयाँ पत्रिकाहरू । झ्यालमा मनमोहक फूलका गमला । एक कुनामा गाढा रातो बुट्टादार रेशमी खोलले ढाकिएको आरामकुर्सी ।
“म कहाँ छु ? सपनामा त होइन ?” अहँ ¤ यो सपना थिएन । लेनिन आफ्नी दिदी अन्ना इल्यीनिच्नाको घरमा थिए ।
उनलाई हिजोको सुखद दिन र अपूर्व भेटघाटको सम्झना आयो । रेल स्टेसनदेखि हतियारयुक्त गाडीले उनलाई नतर्की शेसिन्स्कायाको भूतपूर्व दरबारमा लिएर आयो । अब यहाँ बोल्शेभिक पार्टीको केन्द्रीय समिति र नगर समितिको मुख्यालय थियो । हतियारयुक्त गाडी बिस्तारै गुडिरहेको थियो ।
झमक्क रात परेको थियो । तैपनि धेरै घरहरूका बत्ती निभेका थिएनन् । सडकमा मानिसहरूको घुइँचो थियो । ‘लेनिन ¤ लेनिन ¤’ मानिसहरू चिच्याइरहेका थिए । गाडी बारम्बार रोकिन्थ्यो ।
लेनिनले जनतालाई सरल र स्पष्ट भाषामा समाजवादी क्रान्तिको बारेमा बताउने कोसिस गरिरहेका थिए । उनको हृदयमा जोसिला शब्दहरूको छाल उर्लिरहेको थियो । नेभा र पेत्रोपाब्लोभ्स्क किल्लाभन्दा केही पर अवस्थित शेसिन्स्काया दरबार जनसागरले घेरिएको थियो ।
“लेनिन बाहिर आउनुस् ¤ लेनिन केही बताउनुहोस् ¤” जनसमूह चिच्याइरहेको थियो ।
लेनिनले बरण्डामा आएर धेरैचोटि जनसमूहलाई सम्बोधन गरे । रातको समय नहुँदो हो त बरण्डादेखि पेत्रोपाब्लोभ्स्कको सुनौलो धरहरा र अभेद्य भित्ताहरू अवश्य देखिने थिए । यी भित्तापछाडि किल्लाका कुवाजस्ता अँध्यारा र चिसा कालकोठरीहरूमा रूसका कति होनहार मानिसहरू कैद गरिएका हुँदा हुन् । अब भने उक्त राक्षसी किल्लाको भय थिएन, कुनै खतरा थिएन ।
“बगेको खोला फर्किँदैन्,” लेनिनले जनसमूहलाई भनेका थिए । “अगाडि बढौँ साथीहरू ¤ समाजवादी क्रान्ति जिन्दावाद ¤”
दरबारमा पेत्रोग्रादका सम्पूर्ण बोल्शेभिकहरू एकत्रित भएका थिए । उनीहरू न आफू त्यहाँबाट निस्कन्थे, न लेनिनलाई निस्कन दिन्थे ।
बल्लतल्ल बिहान पाँच बजेमात्र क्रुप्सकायासँगै लेनिन थकित तर प्रफुल्लित भई घर पुगे । अब भने उनीहरू आफ्नो मातृभूमिमा थिए । यसबीच के कति दुःख खेप्नुपरेन र ? आखिर रूसीहरूको जीवनमा महान् मोड आइछाड्यो ।
उत्तेजना र उत्सुकताका कारण लेनिनलाई राम्रो निन्द्रा पनि परेन । जम्माजम्मी घन्टाभर निदाए क्यार । हल्का झप्को लाग्नेबित्तिक आँखा खोलिन्थे । घर सुनसानै थियो ।
लेनिन उठे र गल्लीमा टहल्न थाले । उनलाई पूरै घर समुद्रमा तैरिरहेको जहाजजस्तो लाग्यो । लामो साँघुरो गल्ली, त्यसको दुवैतिर क्याबिनजस्ता कोठा । जहाजको अघिल्लो हिस्साजस्तो । भान्सा कोठामा पियानो राखिएको थियो । उल्यानोभ परिवार जहाँ रह्यो, पियानो सधैँ साथ रह्यो ।
लेनिनले ‘स्वरलिपिहरू’ उठाए । यी आमाका स्वरलिपिहरू थिए । बदलिँदो रूस हेर्न उहाँ सात महिना बढ्ता बाँच्न सक्नुभएन । क्रुप्सकायाकी आमा पनि संसारबाट बिदा हुनुभयो ।
लेनिनले शोकाकुल नजरले जहाजको अघिल्लो हिस्साजस्तै देखिने कोठामा नजर दौडाए । यो झुल्ने कुर्सीमा आमा मजेत्रो ओढेर किताब हातमा लिएर बसिरहनुहुन्थ्यो । उहाँ बुढी र कमजोर हुनुभएको थियो र हरबखत आफ्ना सन्तानको यादमा हराइरहनुहुन्थ्यो । सन्तानहरू कोही निर्वासनमा थिए, कोही जेलमा । बिचरी आमा ¤ आफ्ना सन्तान भेट्न उहाँले कुनमात्र जेलको ‘दर्शन’ गर्नुभएन र ¤ पिटर्सवर्गको जेल, सरातोवको जेल, किभको जेल… ।
परिस्थितिले उहाँलाई कुनमात्र सहरको कुनाकाप्चा चहार्न लगाएन र ? लेनिनले स्वरलिपिहरूलाई पियानोमा राखे र चुपचाप आफ्नो कोठामा फर्किए । पहिले यो कोठा आमाको थियो । आमाको आखिरी निवास । आमाको कुर्सी । गहिरो गाढा रङ्गको बुट्टा भरिएको कुर्सीको खोल उहाँले नै सिलाउनुभएको थियो । आमा ¤ हजुरलाई एक क्षण भए पनि देख्न पाए हुने, तिम्रा कोमल हात फेरि चुम्न पाए हुने ।
चाँडै नै घरका सबैजना जागे । आजको बिहानी हिजोको जस्तो थिएन । हिजो सबै खुसी थिए, उमङ्गले पुलकित थिए । आज जोकोही दबेको स्वरमा कुरा गर्दै थियो । बाटोभरि लेनिन चुपचाप रहे ।
लिगोभ्कादेखि भोल्कोभ चिहानघाटसम्म रस्तान्नाय सडक (बिदाइ सडक) हँुदै जानुपथ्र्याे । यो शोकसन्तप्त सडक थियो, अन्तिम लक्ष्य थियो । यसपछि बिदा, सदासर्वदाका लागि बिदा ।
चिहानघाटमा हिउँ पग्लिसकेको थिएन । चिहानहरूका बीचबीचमा सेता थुम्काहरू टल्किरहेका थिए । सल्लाको एउटा हाँगा आमाको चिहानमाथि राखिएको थियो । नजिकै अर्को सानो चिहान थियो । ओल्याको चिहान । त्यसमाथि एस्पको हाँगा झुकेको थियो ।
लेनिनले टोपी निकाले र शिर झुकाई धेरै बेरसम्म उभिइरहे । आँखा अगाडि बालापनका दृश्य नाच्न थाले । सिम्बिस्र्कको घर । भान्साकोठामा बत्तीको मन्द उज्यालो । बालबच्चा खाना खान चारैतिर बसेका थिए । आमाले किताब खोल्नुहुन्छ । केटाकेटी कुनै रोचक र असामान्य कहानी सुन्न उत्सुक छन् । आमाको आवाज कति मीठो र कोमल छ । फेरि अर्को दृश्यको झल्को आयो । कारागारको ढोका चर्को आवाजसाथ खुल्छ ः “कैदी उल्यानोभ, तिम्री आमा भेट्न आएकी छन् ।” उनी जेलको गल्लीमा दौडिन्छन् । आमासँग भेट्ने समय नघटोस् भनी डराउँछन् । टाउकै ठोकिने होचो छतसहितको अँध्यारो कोठा । बीचमा दोहोरो जाली । आमाको प्यारो मुहार जालीमा टाँसिएको छ । आँखाबाट स्नेहको मूल फुटिरहेको छ ।
“भोलोद्या सञ्चै त छौ ? तिम्रो लागि दूध र खानेकुरा ल्याएकी छु । तिमीले मगाएका किताब पनि ल्याएकी छु । ती पनि” ।
“आमा, मेरी आमा ¤ तपाईँले हाम्रो नयाँ जीवन देख्न पाउनुभएन । कस्तो दुःख हो, कस्तो बिडम्बना हो ¤ आमा, प्यारी आमा, तपार्इँको विवेक, तपार्इँको उपकार कहिल्यै बिर्सन सक्नेछैन ।”